Heshiiska Dhexmaray Col. C/llahi Yusuf iyo Gudoomiye Shariif Xasan oo u muuqda in nin waliba xilkiisa aan lagu soo faragelin
Buluugleey, January 7, 2006
Dagaalka labada nin ayaa wuxuu bilowday markii Shariif Xasan ay jagada gudoomiyaha baarlamaanka ay u doorteen taageerayaasha ugu badan aqalka wakiilada, kuwaas oo ka dhan ahaa siyaasada Itoobiya ee ku saleysan in Soomaaliya ka aynan ka dhalan dowlad xoog leh. Waxaa xigtay kooxda taageersan siyaasada Itoobiya oo iyaguna ku guuleystey in Col. C/llahi u ku soo baxo tartankii madaxweynenimada. Dabadeedna waxaa durbadiiba timid in Shariifka xilkiisa laga soo qaaday in laga maarmay oo xataa laga wareegsaday in wadatashi lagala sameeyo magacaabista howlwadeenada dowlada ee Shariifka degaan ahaan ay ka soo wada jeedaan.
Khilaafkaas oo sii xoogeystay ayaa labada nin sharafdarro weyn u geystey gaarahaan xilka madaxweynaha iyo kan gudoomiyaha barlamaanka oo labaduba ku awood beelay, ismaandhaafkooduna sababay kala jabka dowlada. Labaduba waxey awoodii waayeen iney xoolo iyo aqoonsiba dibeda ka helaan, waxeyna dowladii iyo golaha baarlamankuba ay ku kala tageen dhaqaale xumo awgeed. taasina waxay dhalisay in labada nin midkoodna wax miisaana hadalkoodu kuma yeelan gudaha iyo dibeda midna.
Dowlada Itoobiya iyo Yemen oo dano gaara ka leh dalka Soomaaliya ayaa waxaa u cadaatay inaan sida xaalku ku socdo aysan ahayn mid ay ku gaari karaan ujeedooyinkooda oo ah iney arkaan dowlad Soomaaliyeed oo ay ka fushan karaan danahooda ah inay maamushaan kheyraadka wadanka iyo in ay ka faa'ideysataan deeqaha dibeda ka soo gala dalka. Labadaas dowladood ayaa ka dambeeyey iney wax ka bedelaan jidkii horay loogu qorsheeyey Col. C/llahi uu ku wado siyaasadda Soomaaliya, waana xeeladaas mida dhalisay heshiiskan deg-degga ah ee dhexmaray Col. C/llahi iyo gudoomiyaha barlamaanka Shariif Xasan.
Heshiiska ayaa la saadaalinayaa inuusan ahayn mid taaba gal ah, keeni karana dowlad mideysan sababaha soo socda awgeed:
Xubnaha dowladda iyo gollaha baarlamaanka ayaa waxaa u badan dagaaloogayaal ee ka hormariya dantooda danta guud, iyo madax rayid ah oo musuq-maasuq iyo xatooyada xoolaha deeqda dalka ku caan baxay.
Col. C/llahi Yusuf oo aan weli ka tanaasulin in Soomaaliya la soo gelinin ciidamo Itoobiyaana, iyo iyadoo weliba dowlada Itoobiya oo dadaal ugu jirta in kullanka kowaad ee baarlamaanka iskugu imaan doono arrintaas lagu ansixiyo.
Waxaa xubnaha dowlada horkacaya shaqsiyaad dowladihii hore ee dalka Soomaaliya soo fashiliyey, welina danahooda gaarka ah u adeegsanaya nidaamka maafiyada.
Col. C/llahi oo weli diidan in xaruunta dowlada dhexe ee Soomaaliya ay noqoto magaalo madaxda Soomaaliya oo ah Muqdisho.
Sidoo kale,heshiiskan kuma xusna in la isku keeno garabyada xubnaha dowladiisa, laakiin waxaa xooga la saaray isku keenida xubnaha baarlamaanka.
Col. C/llahi oo weli ka soo horjeeda in beesha caalamka ay ka soo qeybgasho dhex-dhexaadinta dowladiisa iyo baarlamaanka, waana taas mida uu ku adkeysanayo in wadanka gudahiisa lagu qabto shir dib u heshiisineed si meesha ay uga baxdo inaan nidaam kale aan dibeda laga soo dhisin oo markaas dhalin kara in madaxtinimadiisa uu ku waayo, madaama uu shaqeyn waayey nidaamkii lagu soo dhisay dowladiisa.
Shirka lagu ballaminayo baarlamaanka oo ujeedadiisa ugu weyn ay tahay sidii looga raacdeyn lahaa dowlada xubnaha ku sugan Xamar ee ka soo horjeeda siyaasada Col. C/llahi, iyadoo sabab looga dhigayo in la kala diro dowlada hadda dhisan. Taasina waxay Col. Cabdullahi u sahli kartaa in yididiilo la geliyo lana soo dhiso xubna kaloo cusub ee taageersan fikirkiisa.
Heshiiska ay kala saxiixdeen Col. C/llahi iyo gudoomiye Shariif Xasan ayaa ah mid inta badan u daneynaya Col. C/llahi Yusuf iyo dowlada Itoobiya, maxaayeelay dhibaatada iyo dooda ayaa ah mid lagu soo jeediyey golaha baarlamaanka iyo hogaamiye koxeedyada Muqdisho. Waxaa meesha laga saaray in aysan doodi haba yaraatee ka taagneyn dowlada dhisan iyo madaxweynaheeda. Waxaa heshiiskani si maldahan muujinayaa in meesha dhibaatadu ay ka taagan tahay ay tahay golaha baarlamaanka. Waxaa loo bahan yahay in ay muhiim tahay in ay kulmaan iyagoo wada jir ah, taas oo ay ku hoos qarsoon tahay in haddii muranku sii xoogeysto ay meesha imaaneyso in gudoomiyaha si fudud lagu casilo, halkaasna ay ku wayaan kooxda Muqdisho taageeradii ay ka heli jireen golaha baarlamaanka iyo gudoomiyahiisa. qodobka heshiiska ee xusaya "barlamaanka" ayaa ah mid qiil loogu raadsanayo in lagu casilo xubnaha dowlada, gaar ahaan kooxda Muqdisho, dabadeedna gabagabada doodaas ay galaafato gudoomiyaha barlamaanka naftiisa.